Zviri Official, ndiri paCrackberry | Martech Zone
Zviri Official, ndiri paCrackberry
Mushure memwedzi nemwedzi yekufunga, ini ndakazopedzisira ndaita gwaro ndikatenga a Blackberry Rakakombama 8330 manheru ano kuchitoro cheVerizon.
Ndanga ndichishandisa Samsung yekubata chidzitiro chegore rapfuura uye ndarovha zvisingaverengeke mafoni, haigone kuenzanisa makarenda, uye handigoni kumira ndichiitarisa kuti ndipindure runhare.
Ini ndiri fan mukuru weApple, asi ndanga ndichivhiringidza yangu iPod Kubata mwedzi wapfuura kuti ndione kana ndingajairire iyo yekubata skrini. Handikwanise. Kune avo imi vanoti zvinova nyore, haina… ini handidi foni yandinofanira kunge ndakatarisa kuti ndiishandise.
IMHO, zvinoita kwandiri kuti kubata zvidzitiro zvakatidzorera kumashure nhanho, kwete mune ramangwana.
Zvakare, shamwari dzangu dzakawandisa dzakatamira kuBlackberry. Chris Baggott, CEO weCompendium akatobvisa zvake iPhone kuti adzokere kuBlackberry. Adam Mudiki, CEO we Kubatanidza Nhare, anga achiedza kutaura neni muBlackberry kwechinguva. Uye shamwari nyowani Vanessa Lammers akandiudza kufara kwaakaita neBlackberry yake.
Heck, kana Mutungamiri Obama vasingakwanise kuita pasina yake Crackberry, ndinogona kungofungidzira kukura kwakaita sevhisi nechigadzirwa. Manheru ano ndiri kungo funga kuti ndogadzira sei nekugamuchira mafoni. Sezvakakurudzirwa naAdamu, ini ndakaburitsa Twitterberry kuti ini zvirinani ndinogona tweet kubva pairi!
Tags: ahrefschiremera labsauthoritylabskwedzachinzvimbo chekuteverakumisikidza wordpress
Jul 1, 2009 na11: 00 PM
Tinofara nekushandurwa. Ini ndinofanira kusawirirana newe nezve touch skrini. NeSvondo ndakasimudzira Blackberry yangu kune inobata screen Dutu uye ndoida. Ini ndinozviona zviri nyore kushandisa uye kuve neiyo yakazara webhu browser zvakanaka.
Ini ndicha shambadza iyo makore maviri apfuura apo ini ndachinjira kune yangu yekutanga Blackberry ndanga ndichiudza shamwari yangu nezvazvo uye akati aisaziva kuti sei vanhu vachivada. Zuva mushure mekuona yangu ndinowana runhare kubva kwaari pane yake nyowani.
Jul 1, 2009 na11: 16 PM
Usaite kuti ndive nepfungwa dzechipiri! 🙂
Jul 2, 2009 na6: 22 PM
Ini ndakapindwa muropa neBlackberry yangu futi. Ndakawana Dutu futi
Jul 1, 2009 na11: 05 PM
Kwakanaka iwe! Makorokoto pachisarudzo chako!
Zve twitter, kurudziro yangu ndiUberTwitter… uye ndizvo zvese zvaunoda. Izvo zvekushandisa zvikumbiro zvakanaka zvakakwana kuti zviende.
Nakidzwa Curve yako ... iri gehena mudziyo!